Yaa firaa mee waan kana ilaalaa tii akka ta'e godhaa -
YAADACHIISA: – Abbootiin qabeenyaa Oromoo gaaffii tokko malee (by default) deggertoota qabsoo bilisummaa fi dimokraasii saba Oromoo ti. Qabsoon bilisummaa Oromoos alagaa biyya Oromoo humnaan qabatee saamaa fi hacuucaa jiru irratti xiyyeeffata malee abbootii qabeenyaa Oromoo hin diineffatu. Dureeyyiin Oromoo alagaan biyya isaanii Oromiyaa humnaan qabatee lafaa fi lafee Oromoo qorqaa jiraachuun isaan quuqa. Hedduun isaanii alagaa qabeenya Oromoo fi Oromiyaa ujummoo itti kaa’ee xuuxaa jiru of- irra calaasuuf qabsoo ummati Oromoo mirga abbaa biyyummaa ofiif adeemsisu keessatti wareegama ulfaataa baasaniiru. Wayyaaanoti Tigraayi abbootii qabeenyaa Oromoo sab-boontota ta’an garii shira adda addaan dhabamsiisaniiru. Ambo keessatti abbaa qabeenyaa beekamaa obbo Daraaraa Kafanii, Gimbii keessatti Issaayaas (Diimee) fi bakkoota biroottis dureeyyii Oromoo itti dhukaasanii ajjeesan. Abbootii qabeenyaa Oromoo hedduu isaanii sababa adda addaa itti funaananii qabeenya isaanii dhaaluun ykn kasaarsuun daldala ala taasisan. Kaan doorsisanii akka isaan qabeenya isaanii dirree irratti dhiisanii ykn facaasanii biyyaa baqatan taasisan.
Akkasumas beekaas ta’e wallaalaan, ykn doorsisa alagaa sodaachuun abbootiin qabeenyaa Oromoo Wayyaanee tumsan darbee darbee hin dhibamne. Kun sabaa ofii miidhuu qofa utuu hin taanee harka ofiin alagaa of irratti goobsuun dogoggora seenaa raawwachuu dha. As irratti wanni hubatamuu qabu dureessi ykn abbaan qabeenyaa Oromoo hiree argatee qabeenya mul’ataa horate eenyu iyyuu deemee deemee hireen isa eeggatu shira wayyaaneetiin hojii ala taasifamuu fi qabeenyi isaa faca’uu dha. Lammiin Oromoo sirna Wayyaanee jalatti qabeenya horuuf iyyuu hireen isaa dhiphaa dha. Namni Oromoo qabeenya guddaa qaba jedhamu lakkoobsaan xiqqaa dha. Lammiin Oromoo qabeenya wayyaa horate siyaasa Wayyaanee illee yoo deggere qabeenya isaa irraatti mirga guutuu hin qabu. Bilisummaa hin qabu, qabeenyi isaa wabii hin qabu. Kanaaf dureeyyiin Oromoo dhiibbaa fi doorsisa sirna Wayyaaneef utuu hin jilbeenfatin qabsoo saba isaanii bira dhaabbachuutu irraa eegama. Dhimma adda addaaf buusii maallaqaa Wayyaaneen umurii bittaa ishee dheereffachuuf gaafattu kennuu diduu, gibra baasuu diduu fi kkf raawwachuun warraaqsa bilisummaa Oromoo deemaa jiru keessatti qooda fudhachuutu irraa eegama. Qabsoo bilisummaa fi dimokraasii saba Oromoo deggeruuf dirqama seenaatu isaan irra jira Qabsoo bilisummaa (Liberation Struggle) fi Warraaqsa Domocrasii (Democratic Revolution) adeemsifamu tokko keessatti dureeyyiin biyyaa (National bourgeois or merchant class) gaaffii tokko malee (by default) deggertoota qabsoo ykn warraaqsa sanaa ti. Biyyaa fi ummata ofii ni jaallatu. Kun waanuma seenaa qabsoo bilisummaa ummatoota addunyaa keessatti beekamu dha. Dureeyyiin alagaa, koloneeffattooti, biyya ykn saba tokko humnaan cabsanii kan qabataniif akeeki isaanii biyya humnaan qabatan sana keessaa qabeenya uumamaa dheedhii(raw materials) guurrachuu, maqaa investment dhaan qonnaan bulaa abbaa biyyaa buqqisanii qonna daldalaa(commercial farm) babal’ifachuu , dhaabbattoota maallaqaa akka Baankii dhuunfachuu, Industrii fi warshaa ijaarrachuu fi empaayera daldalaa diriirfachuun saamicha daangaa hin qabne geggeesuu dha. Uummata koloneeffatan sana abbootii qabeenyaa uummata sana keessaa dhalatan warra abbaa biyyaa osoo hin hambisin hunda qabeenya isaanii fi qabeenya biyya isaanii saamu, isaan hacuucu, ykn gadi qabu. Kanaaf abbootiin qabeenyaa warri abbaa biyyaa alagaa biyya isaanii weerare of irraa kaasuuf murnoota hawwasaa qabsoo keessatti qooda fudhatan keessaa tokko dha. Inumaahuu warra shira alagaatti dafanii dammaqanii fi irratti qabsaa’an keessaa warra duraa keessatti argamu.
Waayyaanti Tigraayi gaafa aangoo qabatan Oromoo ilaalchisanii imaammata ifaa isaan lafa kaawwatan keessaa tokko hoogganoota, sab-boontota, beektotaa fi abbootii qabeenyaa Oromoo dhabamsiisuu kan jedhu dha. Kanas barruu isaanii Hizbaawwii Adaraa jedhu keessatti ifatti mul’isan. Hawaasa Orormoo keessaa kanneen beekumsaa fi qabeenyaa qaban, nu dura dhaabbachuu danda’u jedhan, dhabamsiisuu karoorfatan. Hawaasa Oromoo hiyyoomsanii harka kennachiisuu fi hooggana dhabsiisanii bara baraan bituuf imaammata ifaa lafaa qabu.
Kanaaf qabsaawotaa fi ummati Oromoo abbootiin qabnyaa Oromoo deggertoota qabsoo bilisummaa Oromoo ti jedhanii amanu. Qabsoon bilisummaa Oromoos abbootii qabeenyaa Oromoo irratti kan xiyyeeffatu miti. Waan ta’eef hundinuu kana irratti hubannaa tokkoon socho’uun barbaachisaa dha. Kanuma wal yaadachiisuuf.
4 thoughts on “Yaa firaa mee waan kana ilaalaa tii akka ta’e godhaa”
Ummani kanna wanta adaan basse bekka naati fakkata. Abban qabeenyaa Oromos Qerrodhaa gummachuu qabba, akkumma TIGRE dha gibbirra kafallau saanatti jechuu kotti
Zabarga Bogale says:
Victory will come ONLY if all Oromos regardless of class, region, religion, gender, educational levels, etc. seof some 6% tplf dictators. For the great 45 million Oromos pointing their shameless fingers at each other jut like the bygone days and doing the same shamelful acts will only give them the same old slavery while strengthening the tactful and cunning divisive tplf rober barons. WE ARE ALL OROMOS!!
Korma Gadaa says:
Obbo Tulluu Caalii,
Maali kaayyoon barreeffama kanaa? Yaadota wal rukutantu as keesaa calaqqisa.
Erga atumtuu Wayyaaneen abbootii qabeenyaa Oromoo fi ummata Oromoo ilaalchisee imaammata barreeffame laafaa qabdi jettee waa’ee ” Hizbaawwii Adaraa” kaaftee, Oromoo hagas duroomee faallaa qabsoo kanaa hin jiru tahee waa’ee murna tokkoo (ykn abbootii qabeenyaa Oromoo) qofa kaafnee maaltu itti nu cinqeree?
Akkuma ifatti argaa jirru immoo Fincilli Xumura Gabrummaa ummati Oromoo itti jiru alagaa (saboota biroo) lafa Oromoo irra jiraatanuu akka hin tuqamne sadarkaa maanguddooti Oromoos tahe qabsoon Oromoo dhaamsota sochii FXG kana keessaatti hunmmata Oromoof dabarsaa turantu beekamee kabajas argachaa turee ammas itti jira.
Yoo akkas tahe maaltu obbo Caalii cinqeree?
“Abbootiin qabeenyaa Oromoo gaaffii tokko malee (by default) deggertoota qabsoo bilisummaa fi dimokraasii saba Oromoo ti” kan jedhu eenyutu blabse? Ayyaanlaallattoota meeqatu Wayyaanee waliin hojjechaa turee qabeenya Oromoo diina waliin saamaa turanii ala kanatti baafataa akka jiran ifaadhaa. Ati nama mooraa qabso Oromoo keessa jirtu yoo taateef ilaalchi ‘catagorization’ fi ‘generalization’ akkasii balaa guddaa akka gara fuunduraatti fiduu danda’u akeeka. Maaliif yoo jenne, ammatti osoo waa’ee abbootii qabeenyaa Oromoo kallatiin kan ilaalu rakkoon hin kahin yaadi akkasii yoo calaqqise, gaafa Oromiyaan bilisoomte, warren daba hojjetaa turanis sababa ‘lafa jalaan qabsoo deggeraa turan jedhuun’ ykn waan ati dhuunfaatti abbootii qabeenyaa kannen beektuuf muggutiin dhufa jechuudha
nagaadhaa ? barreeffami kun akka yaadaatti gaariidha. garuu mata dureen isaa maalii ? meee ilaalaa akka ta’uu godhaa jechuun, ofirra baasuu malee furmaata ta’ee hin beeku. kun sirrii mitii. irratti hojjatama ykn barbaachisaa taanaan miidhagsanii baasuu malee eenyutu eenyutti darbatee inni kaan akka raawwatu taasifama. pls waan akkasii dhiisaa. ofitti amanaa.